Ahoana ny fomba hanaovana ny trano fisakafoanana paty Ramen ho mendrika
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ahoana ny fomba hanaovana ny trano fisakafoanana paty Ramen ho mendrika
Aprily 8, 2020
Inona no handrahoana sakafo hariva? Amin'ity COVID-19 coronavirus taonan'ny #stayathome sy famatsiana voafetra ao amin'ny fivarotana enta-madinika, maro amintsika no mahita fa miverina kely amin'ny fotoana namboarintsika noho izay nananantsika ary rehefa nivory niara-nisakafo tamin'ny faran'ny andro isika. Angamba na dia fony tany amin'ny oniversite aza izahay ary nihinana tranga misy paty ramen.
Ny ankabeazantsika dia ao an-trano ihany ankehitriny, koa mety hivory manodidina ny latabatry ny lakozian'ny fianakaviana isika, sa tsy izany? Na ny sofa fandraisam-bahiny. Na ny kaontera fisakafoanana an-dakozia misokatra. Saingy ho an'ny vitsivitsy, ny fanamby amin'ny fametrahana sakafo eo amin'ny latabatra mahafinaritra dia tsara, sarotra. Saingy tsy tokony hisy izany. Ary tsy tokony ho lafo koa.
Miaraka amin'ny tsy fahazoana antoka ara-toekarena ny vokatry ny areti-mandringana eo amin'ny tsenan'ny varotra manerantany dia miakatra sy midina toy ny roller coaster ny tahiry. Betsaka tokoa - be loatra - no tsy miasa intsony amin'ny tsy antony hafa ankoatry ny fiatraikan'ity fotoana mampihorohoro ity izay terentsika hiatrika. Isika rehetra dia mijery ny denaria ary mieritreritra indray ny lisitry ny fiantsenana avy amin'ny fifantohana amin'ny zavatra tiantsika ka izay ilaintsika.
Vahaolana iray momba ny famahana ny olana amin'ny zavatra hatao amin'ny sakafo hariva? Ampidiro ny fonosana amin'ny paty ramen. Izany fenitra ho an'ny mpianatry ny anjerimanontolo izany, ho an'ireo vao miaina samirery, na noho ny fotoana tsotra sy tsotra izay sarotra ankehitriny na inona na inona dingana iainantsika olombelona. Arakaraka ny toerana onenanao dia azo vidiana fonosana manodidina ny 50 cents, omeo na raiso ary zarao amin'ny varotra na tapakila. Fa iza no tena hipetraka eo amin'ny lovia ny paty miaraka amin'ny ron-kena ary handeha tsy hahatsapa tummy feno fotsiny fa faly fa nahazo sakafo matsiro izy ireo?
Eto no isehoan'ny ramen eo amin'ny latabatra an-dakozanao, ary ho lasa mahay mamorona ianao mandritra ny fotoana itahirizanao ny teti-bolanao.
Amin'ny toerana misy ramen dia foto-tsakafom-borona ary aroso any amin'ny trano fisakafoanana eo akaikin'ny sakafo menavava lafo sy lafo kokoa toa ny henan'omby Wagyu, dia tonga eo alohanay ireo lovia famaohana fampiononana misy koban-tsakafo hahafinaritra ny tsironay.
Alao an-tsaina fotsiny…
Alao sary an-tsaina ange ny lovia paty misy voamaina mitsakitsaka ao anaty ron-kena mafana miaraka amina henan-kisoa voadidy manify manify, atody voadidy am-bava, ravina ahidrano, kimchee Koreana masiaka, ary boribory tongolo maintso voatetika… angamba aza ny mpivady na dumplings miharo zava-matsiro kokoa.
Fivarotana ramen sasany no nahazo ny satan'i Michelin-kintana. Ny lovia kely ramen dia hamerina anao $ 15. Dimy ambin'ny folo dolara ho an'ny paty paty 50 cent sy fonosana manitra iray. Eny, noho izany, ireo trano fisakafoanana ireo dia manamboatra lasopy manokana miaraka amin'ny tahiry taolana izay maharitra roa andro… tsy izany no izy. Amin'izao tontolo izao ankehitriny, azonao atao ny manamboatra irery ireto lovia fampiononana ireto: Ary azonao atao ny mampiasa sombin-javatra sisa tavela sy ity sy izay mba hanaovana azy. Alohan'ny hahalalanao azy, ny tampon'ny vilia ramenanao dia voaravaka sombin-kazo manaikitra mamirapiratra toy ny fanomezana fety ao ambanin'ny hazo kesika.
Toppings natao mba hanafarana
Andao hanombohana anao amin'ny fomba handravahanao ny lovanao amin'ny paty ramen. Andao lazaina angamba hoe manana akoho sisa ianao - nosoratanao fotsiny dia apetaho amin'ny ramenanao ny ampahany amin'izany. Nahazo atody? Andrahoy vitsivitsy ary atsipazo amin'ny antsasany ary ampidiro ao anaty viliao. Mahagaga fa lasa manaitra be ny atody voadidy tsotra. Vitsy kely fotsiny ny zavatra ilainao hamenoana ireo habaka eo an-tampon'ny vilia paty ramen (sy ireo toerana mikotrokotroka ao anaty vavoninao). Angamba ianao manana sombin-legioma sisa tavela amin'ny fanomanana sakafo teo aloha. Io no fotoana tena nahitan'ireo sombin-javatra kely sisa tavela ary vitsivitsy ihany hatreto. Andramo ampiana amin'ny mony ramenanao ny holatra vitsivitsy, ny voanjo, ny karaoty voatsinjara, ny bokotra nosokafana, ny edamame, ny epinara ary ny Spam (eny, hoy izahay ny teny "S"). Ary maninona raha mieritreritra any ivelan'ny boaty ary manova ny zom-pirenena paty ramen-nao? Ahoana raha nataonao Amerikanina io?
Ahoana ny amin'ny lovia ramen miaraka amina voan-trondro volamena, akoho nendasina sisa tavela, bacon voatetika, holatra voatoto, ary sahintsika ve ny milaza izany? Cheese! Tranga izay tena malaza any amin'ny toerana toa an'i Korea izany. Tian'izy ireo ny fromazy amin'ny zavatra rehetra. Hey, andramo izany, mety tianao ny famafazana cheddar na mozzarella mavesatra be amin'ny ramenanao. Angamba koa andramo dipoavatra voadidy ho proteinina sy dipoavatra maintso, ary manaova andiam-pitia pizza ho an'ny ramen. Tena tsy misy farany ny azo atao!
Noho izany, kapohy ny hazokely fihinanana - na ho avy ny fork - ary sotro lehibe amin'ny lasopy raha manana ianao. Raha tsy izany dia ekena tsara ny fakana ny vilia amin'ny tanana roa ary atsofohy aminy ny ron-kena. Raha ny marina, amin'ny fisakafoanana Japoney nentim-paharazana, vao mainka mihalehibe ny fitoratanao - toy ny miteny hoe: “Fiderako ny chef!”
Fitsaboana hita ho an'ny COVID-19 miaraka amin'ny fatra tokana amin'ny fanafody efa nankatoavin'ny FDA?
Areti-mifindra COVID-19: Tsy misy fotoana hampihenana ny fiscal